विश्व नै कोरोनासंग जुधीरहेका बेला चीनले नेपाललाई दियो फेरी यस्तो ठुलो अफर, नेपाली बने खुसी – Khabarhouse
विश्व नै कोरोनासंग जुधीरहेका बेला चीनले नेपाललाई दियो फेरी यस्तो ठुलो अफर, नेपाली बने खुसी
Khabar house | ५ चैत्र २०७६, बुधबार ०७:४५ | Comments
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सुरुमै प्रभावित भएको छिमेकी चीनले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध लड्न आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ । चिनियाँ दूतावास मार्फत चीनले नेपाल सरकारलाई के-के सहयोग र सहा यता आवश्यक पर्छ भनेर लिस्ट समेत मागेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल कोरोना संक्रमणको सम्भावित दबावमा रहेको र यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा प्रभाव पारेको भन्दै चीन यसबेला नेपाललाई सबैखाले सहायता दिन तयार रहेको जानकारी गराइएको छ । चीनले केही राष्ट्रलाई सहा यता बढाउने नीति अनुरुप नेपालको आवश्यकता के हो भनेर सोधेको हो ।
चीनले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सोधिएको छ– के नेपाल योबेला चीनको सहयोग र सहायता चाहान्छ ? जस्तो कि नेपाल लाई उर्जामा सहायता चाहिएको हो ? नेपाललाई हामीले मास्क र अ’न्य मेडिकल सप्लाइजहरु सहितको मेडिकल टिम पठाउनु पर्छ ? हामी जुनसुकै बेला पनि तप्तर छौं । चीनले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्य भएसँगै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक चीनबाटै पहिलो भ्रमण गराउन समेत चाहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै उसले चीनले नेपालका विकास परियोजनाहरुमा तिब्रता दिइने समेत बताएको छ। चीनसँग आवश्यक सहयोगबारे छलफल भइरहेको कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए । उनले चीन र भारत दुवैतिरबाट सहयोगको कुरा आएको प्रष्ट पार्दै नेपाल सबै छिमेकीहरुसँग मिलेर यो महामारी वि’रुद्ध ल’ड्न सक्षम रहेको बताए ।
केही दिनअघि मात्र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग टेलिफोन गरी नेपाललाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन चीनले आवश्यक जुनसुकै सहायता गर्ने बताएका थिए । नेपालले चीनलाई कोरोना विरुद्ध लड्न १ लाख थाम मास्क पठाएर ऐक्य वद्धता जनाएको थियो ।